Unyanzvi parameter uye maitiro kugona kwesimbi substrate (MCPCB)
Pamusoro LF HASL, kunyudza goridhe, kunyudza sirivheri, OSP
Rukoko Yakasarudzika divi, mbiri mativi Multilayer uye yakakosha chimiro
Kunonyanyisa pcb saizi 240mmx1490mm KANA 490x1190mm
Pcb ukobvu 0.4-3.0mm
Mhangura Foil ukobvu H 1/2/3/4 (oz)
Insulation rukoko ukobvu 50/75/100/125/150/175/200 (um)
Simbi Base ukobvu Aluminium (1100/3003/5052/6061), Mhangura Aluminium
Simbi Base ukobvu 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 3.2 / 5.0 (mm)
Kuumba Kufa kubaya / CNC Nzira / V-Dura
Bvunzo 100% yakavhurika & pfupi bvunzo
Kuumba shiviriro Die Punching<+- 0.05mm,CNC Route<+-0.15mm,V-CUT
Hole shiviriro + -0.5mm
Min.Hole Dhayamita Yakasarudzika divi 0.5 / Ruviri mativi PTH0.3MM
Solder mask girini / chena / nhema / tsvuku / yero
Min. Tsamba kukwirira 0.8mm
Min.line nzvimbo 0.15
Min. Tsamba upamhi 0.15
screen ruvara bhuruu / chena / nhema / tsvuku / yero
Special hole Nzvimbo yakatarisa / mukombe gomba / yakavigwa kuburikidza mugomba / yakavigwa tangi
Fomati fomati Gerber, Pro-tel, Simba pcb, Auto CAD nezvimwe
MCPCB ndiko kupfupiswa kweMetal core PCBS, inosanganisira aluminium based PCB, mhangura yakavakirwa pcb uye iron based PCB.
Aluminium based board ndiyo yakajairika mhando. Izvo zvinhu zvepasi zvine aruminiyamu musimboti, yakajairwa FR4 nemhangura. Inoratidzira chafarizi chakapfeka dura iro rinodzinga kupisa munzira inoshanda kwazvo ichitonhora zvinhu. Parizvino, Aluminium Yakavakirwa pcb inoonekwa senge mhinduro yesimba simba. Aluminium yakavakirwa bhodhi inogona kutsiva zvisingaoneki zvedongo yakavakirwa bhodhi, uye aluminium inopa simba uye kusimba kune chigadzirwa icho ceramic zvigadziko zvisingakwanise.
Mhangura substrate ndeimwe yenzvimbo dzinodhura simbi substrates, uye ayo kudziya conductivity yakawanda nguva iri nani pane iyo yealuminium substrates uye simbi substrates. Iyo inokodzera yepamusorosoro zvinobudirira kupisa kupisa kweakakwira frequency maseketi, zvikamu mumatunhu zvine musiyano mukuru mukukwirira uye kwakadzika tembiricha uye nemazvo ekutaurirana michina
Thermal kuputira rukoko ndeimwe yepakati zvikamu zvemhangura substrate, saka iyo ukobvu hwemhangura foil inonyanya 35 m-280 m, iyo inogona kuwana yakasimba yazvino- kutakura kugona. Inofananidzwa nealuminium substrate, substrate yemhangura inogona kuwana zvirinani kupisa kupisa kupisa, kuti ive nechokwadi chekugadzikana kwechigadzirwa.
Iyo wedunhu mhangura dura inogadzirwa uye yakatemwa kuita dunhu rakadhindwa, iyo aluminium substrate inogona kutakura yakakwira yazvino kupfuura yakafanana gobvu FR-4 uye yakafanana trace upamhi.
Iyo insulating dura ndiyo yepakati tekinoroji yealuminium substrate, iyo inonyanya kutamba mabasa ekuputira uye kupisa conduction. Iyo aruminiyamu substrate inodzivirira nhete ndiyo hombe yekupisa yekudzivirira mune yemagetsi module mamiriro. Izvo zvirinani iko kupisa kwekupisa kweiyo inodzivirira nhete, zvakanyanya kunyatsoita ndeyekuparadzira kupisa kunoitwa panguva yekushandisa kwechigadzirwa, uye kudzikisa tembiricha yechigadzirwa, Simbi substrate.
Nderupi rwesimbi ratichasarudza seyakavharisa simbi substrate?
Kazhinji, aluminium inodhura zvakadhura kupfuura mhangura. Inowanikwa aruminiyamu zvinhu zviri 6061, 5052, 1060 zvichingodaro. Kana paine zvakakwirira zvinodiwa zvekupisa kudziya, mechina zvivakwa, zvemagetsi zvivakwa uye zvimwe zvakakosha zvimiro, mahwendefa emhangura, mahwendefa esimbi isina simbi, mahwendefa esimbi uye mahwendefa esimbi yesilicon.
1.Audio: Inzwa Zvinobuda, goho gudzazwi, zvine mwero gudzazwi, odhiyo gudzazwi, simba gudzazwi.
2.Power Supply: Kuchinja mutongi, DC / AC converter, SW regulator, nezvimwe.
3.Automobile: Elektroniki regulator, kuvesa, magetsi ekupa controller, nezvimwe.
5.Power Ma module: Invert-er, solid-state relays, inogadzirisa mabhiriji.
6.Marambi uye mwenje: magetsi-anoponesa marambi, akasiyana siyana ane simba-anoponesa mwenje mwenje, yekunze mwenje, danho mwenje, tsime mwenje
Pashure: China Shenzhen Tsika FR4 94v0 Yakadhindwa Circuit Mabhodhi Sevhisi Yemagetsi Kugadzira Dhizaina Imwe Kaviri Multilayer Imwe PCB
Zvadaro: Yakanakisa mhando yemhando yepamusoro emagetsi aruminiyamu akatenderera akatenderera pcb 220V, MCPCB, pcb bhodhi, 94VO pcb
Mhangura Base Pcb
Mhangura Core Pcb
Yakanakisa mhando yepamusoro yesimba realuminium LED yakatenderera ...
Circuit Board Kwakaita pcb Aluminium Chine Mhangura Lay ...
Shenzhen aruminiyamu pcb fekitari SMD yepamusoro MCPCB ...